Vehivavy Kyrgyz Mpanakanto Mamelona Indray ny Tononkalon’Herimpo Fiantsan-Dehilahy Araka ny Nentin-drazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2016 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, عربي, Français, Español, English
Hatanjak'ilay Kintan'ny Pop, Gulzada amin'ny alalan'ny hira mifototra amin'ny tononkalo maneho herim-po momba ny fiainan'i Manas, maherifo amin'ny angano. Dikasary avy amin'ny lahatsary novokarina sy nampidirin'i Sumsarbek Mamyraliev tao amin'ny Youtube.
Ireo mpamerin-tantaran'i Manas, na manaschi,, no mpitahiry ny kolontsaim-bahoaka am-bava izay mbola manjavozavo ny fiaviany. Saika lehilahy hatrany ihany koa ry zareo.
Nafenimpenina nandritra ny fotoanan'ny Firaisana Sovietika, nahazo tselatra mahery vaika teo amin'ny sandriny nandritra ny fitondran'ny filohan'i Kyrgyzstan voalohany, Askar Akayev. ny fomban-drazana mahataona an-tononkalo am-bava avy amin'ny angano manana lohahevitra fiainan'ny mpanjaka mpiady iray,.
Ankehitriny, amin'ny famoahana ny hira pop mifototra amin'ny herim-po[n-dehilahy] hirain'ny vehivavy iray, lasa manana heviny vaovao ny anganon'i Manas, izay mitondra hafatra maika amin'ny tokony hitehirizana ny natiora tsy mampino misy ao amin'ny firenena sy ny vakoka maha-mpinfidrafindra-monina azy.
Ryskulova nanoratra tao amin'ny Facebook:
Ny hery rehetran'ny Kyrgyz Mpifindrafindra-monina, ny fisosa mahatalanjon'ny tendrombohitry ny firenenay. Azo iainana amin'ny alalan'ny feo, ny mozika sy ny hiran'i “Aikol Manas” ny fihetseham-po tena izy. Mijoro toy ny lova ara-kolontsaina lehibe indrindra ao Kyrgyzstan ny vanin-tantara manokan'i Manas. Tao anatin'ny roa taona, nazoto niasa tsy nahalala sasatra izahay hahatafiditra lalina [sy] tsara anay ao anatin'ny kolontsaina mahatalanjona Kyrgyz nandritra ny taonjato maro.
Ity ambany ity rakikira manasongadina an'i Gulzada ary novokarin'i Sumsarbek Mamyraliyev:
Raha fanandratana ny kolontsaina Kyrgyz ny sangan'asan'i Gulzada, dia fihaikana ny fanjakazakan-dehilahy miserantserana ao amin'ny hira ihany koa izany. Satria amin'ny ampahany, dia manana endrika maro ny anganon'i Manas (voasoratra sy am-bava), ary misy ihany koa ny fahatakarana samihafa ny dikan'ny mpanjaka mpiady amin'ny vahoaka Kyrgyz.
Raha nampiasa an'i Manas ho fitaovana hampiray hina ny vondrona ara-poko isan-karazany ao Kyrgyzstan i Akayev, dia vao haingana kosa ity vanim-potoana manokana ity no nalain'ireo nasionalista an-keriny hanamafisana ny toeran'ny foko Kyrgyz ho toy ny “zanak'i Manas”.
Nahatsiaro ho voa mafy ireo feminista sy liberaly raha nosoloina tamin'ny iray amin'ireo Manas ny sarivongana natao ho sariohatry ny fahafahana miendrika anjelivavy manidina, taoriana kelin'ny niaretan'i Kyrgyzstan ny revolisiona faharoa sy mihoso-drà indrindra tamin'ny taona 2010.
Efa ho roa taona lasa izay, nanoratra momba ilay nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices, mpianatra Kyrgyzstan Devochki-Aktivisti (mpikatroka ho an'ny ankizivavy) ny Global Voices.
Miresaka tovovavy Manaschi iray ny tantara iray nivoaka tao amin'ny bilaogy tantanin'i Devochki-Aktivisti miompana ain'ireo taratasy nalefa ho an'i Devochki-Aktivisti.
Tao amin'ny tantara, nanoratra ilay tovovavy hoe:
Efa tovovavy Manaschi (mpilaza tantaran'ny Vanim-potoana Manokana an'i Manas) aho fony 3 taona. Fony aho mbola zaza, nihevitra ny rehetra fa nahafinaritra izany – nihevitra ny ankizy rehetra ho mitovy izy ireo. Saingy niha-lehibe aho, ary nahita fa mihahenjana kokoa ny fiatrehana maha tovovavy. Tamin'izaho 9 taona, nanomboka nilaza tamiko momba ny fihetsika tokony arahiko ny rehetra. Ka nijanona nandritra ny fotoana fohy ny zavatra tena ankafiziko indrindra – ny filazana tantarà. Efa nanaiky tsy fidiny aho noho ny zava-misy fa ankizivavy aho.
Eto ambany, hita manao tononkalo amin'ny endrika Manaschi hampiroboroboana ny miralenta ihany izany vehivavy izany.
*Rising Voices dia hetsika fanentanana ao amin'ny Global Voices. Mikendry hitondra feo vaovao avy amin'ny vondrom-piarahamonina vaovao sy miresaka momba ny teny andala-pahaverezana na teny indizeny eo amin'ny resaka manerantany amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana, fitaovana, famatsiam-bola kely, ary mampiofana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana tsy dia voasolo-tena ka te-hilaza ny tantara nomerika azy ireo manokana amin'ny fampiasàna fitaovana fampitam-baovao ifarimbonana.